Ohere ifufe, ndị iro dị jụụ nke ụwa | Netwọk Mgbasa Ozi
Kwa afọ, ma na Pacific na Atlantic, ajọ ifufe (ma ọ bụ ajọ ifufe, ọ bụrụ na anyị nọ n'Eshia) na-etolite nke nwere ike ịdị obere, inwe ikike dị mkpa iji bibie ihe niile dị n'ụzọ ha. Ma, Gịnị ga-eme ma ọ bụrụ na ajọ ifufe nke mbara igwe etiwapụ Earthwa?
Nke a, ebe ọ nwere ike ịbụ (na, anyị agaghị agọnahụ ya, kwesịrị ịbụ) nro nkịtị, ihe na-abụghị ezigbo, ọ dị nwute na ọmụmụ kwuru ọzọ. Eleghị anya, ee, mana ikekwe emesia.
1 Gịnị bụ ifufe nke mbara igwe?
2 Kedu ka ha ga-esi metụta ụwa?
Gịnị bụ ifufe nke mbara igwe?
Iji ghọta otú ha si etolite, anyị ga-ekwu maka Anyanwụ ma ọ bụ, karịa, ikuku ikuku. Typedị ifufe a na-ebute mmepe nke Nsogbu Kelvin-Helmholtz. A na-akpọkwa ebili mmiri Kelvin ma ọ bụ ebili mmiri Kelvin-Helmholtz, na-eme ma ọ bụrụ na mmụba emee n'ime mmiri na-aga n'ihu ma ọ bụ mgbe enwere ọdịiche ọsọ gafere interface n'etiti mmiri abụọ.
Agbanyeghi na ha no kariri kilomita 500, Katariina Nykyri, onye nyocha na Florida Center for Space and Atmospheric Research, gosiri na nwere ike mepụta ultra-frequency fluctuations na'swa ndọta na ahịrị na-emekọ ihe ahụ na radieshon belt.
Kedu ka ha ga-esi metụta ụwa?
Oke ifufe bụ ezigbo ihe egwu nye satellites nkwukọrịta na ọrụ ndị ọzọ. Ha bụ »otu n’ime ụzọ ndị bụ isi ikuku anyanwụ si ebugharị ume, oke ma gbasie ike na ndọta; n'ihi nke a, ha na-emetụta etu ebili mmiri Kelvin-Helmholtz si eto na ogo ha. '
Enweghi ike nke plasma kpatara ga-agbapụ na ndọta ụwa, nwee ike mepụta agbụ nke ike ọkụ ihe dị ka puku kilomita 67 site na mbara ala. N’iburu nke a n’uche, ọ dị mkpa ịghọta usoro nke na-emetụta uto na ngwongwo nke ihe ndị a.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Ajọ Ifufe » Ohere ifufe, ndị iro dị jụụ nke ụwa
Anyanwụ na-ada na ndọta ụwa